बिहार | Ratopati
‘सुशासन बाबु’ को शासनमा बिहारमा पुनः ‘जङ्गलराज’ access_timeभदौ २४, २०७६
द वायर/उमेश कुमार राय ‘तपाईंजस्तो बकवास गर्न हामी सक्दैनौँ । अपराधीलाई कसरी सुखद समय आएको छ ? पहिले बिहारमा के हुन्थ्यो तपाईंलाई थाहा छैन ? चालीस–चालीस, पचास–पचास मानिसको नरसंहार हुन्थ्यो । राती कोही सडकमा हिँड्न सक्दैनथे । अहिले त एउटामात्र...